Ahoana ny fampiasana Canva: inona izany ary ahoana ny famolavolana amin'ny Canva | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fampiasana Canva: fantaro hoe inona izany ary ahoana ny famolavolana amin'ny Canva
Lola curiel | | Fitaovana famolavolana, dia midika hoe
Canva dia fitaovana famolavolana tsy mampino, mora ampiasaina ary mamela anao hahazo valiny tena matihanina, na dia tsy dia manana traikefa firy aza ianao. Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny fomba fampiasana Canva amin'ny rangotra amin'izay ianao afaka manomboka mankafy ny loharano atolotra azy rehetra. Aza adino!
1 Inona ny atao hoe Canva?
2 Aiza no hahitana modely ho an'ny Canva
3 Ny maodely Canva tsara indrindra
3.1 Modely hampiasaina manokana
3.2 Modely amin'ny haino aman-jery sosialy
3.3 Modely ho an'ny orinasa
4 Banky sary, horonan-tsary, sary masina ary sary
4.1 Lahatsary sy sary
4.2 Sivana sy vokany
4.3 Endrika, sary masina ary sary
5 Tabilao misy any Canva
6 Karazana endritsoratra sy paleta miloko
7 Fanontaniana vitsivitsy mahazatra momba an'i Canva
7.1 Ahoana no ahafahako mamorona ny kaontiko ao Canva?
7.2 Tsara kokoa ve ny miasa miaraka amin'ny modely na avy amin'ny rangotra?
7.3 Ahoana no ahafahako mamonjy ireo volavolako?
Inona ny atao hoe Canva?
Canva dia a fitaovana an-tserasera ho an'ny famolavolana ny atiny, dia fitaovana maimaimpoana Fa manolotra kinova Pro ihany koa, raha mandoa vola manodidina ny 9 euro isam-bolana. Na dia ampy aza ny tombony atolotry ny kinova maimaim-poana ary afaka manao zavatra maro ianao.
Ny iray amin'ireo teboka tsara entin'ity fitaovana ity dia ankoatry ny Internet, manana kinova fampiharana ho an'ny IOS sy Android, hahafahanao miditra sy manitsy ny volavolao amin'ny solosainao sy amin'ny telefaona findainao.
Izany dia fitaovana mety hamoronana atiny ho an'ireo tambajotra sosialy, na manana mombamomba ny orinasa ianao na raha tambajotra manokana. Saingy loharanom-pahalalana tsara koa izy io amin'ny famoronana atiny malaza, toy ny infografika na fampisehoana.
Aiza no hahitana modely ho an'ny Canva
Izy ireo no loharano mahery indrindra any Canva. Na amin'ny fampiharana na amin'ny Internet dia hahita modely tsy manam-petra ianao hamela anao izy ireo mamorona atiny haingana dia haingana, satria tsy maintsy misafidy iray fotsiny ianao ary manolo ireo sary sy lahatsoratra amin'ny anao.
Mba hahatonga ny modely hifanaraka tsara kokoa amin'ny atiny dia azonao atao hatrany ny manova singa sy loko sasany amin'ny endrika.
Ny maodely Canva tsara indrindra
Modely hampiasaina manokana
ny môdely mamela anao hamorona resume manintona mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Any Canva dia manana endrika CV sy loko ary loko rehetra ianao, ka io fanoloran-kevitra hataonay foana io mba hampifanaraka ny endrik'ilay CV amin'ilay asa ampanaovinao miaraka amin'ity fitaovana ity dia mety hijanona tsy nofy ratsy.
Manana endrika minimalista ianao ary famolavolana be pitsiny kokoa. Aza adino fa ny modely dia azo ovaina ka raha tsy resy lahatra amin'ny loko ianao ohatra, fa raha ny endrika dia azonao ovaina foana.
Loharano iray hafa ampiasaiko be dia be ny modely hatao planning ary kalandrie. Azonao atao ny manamboatra azy ireo ary izy ireo dia fitaovana tsara handaminana ny herinandro, ny volana na ny andronao.
Modely amin'ny haino aman-jery sosialy
Ho an'ny tambajotra sosialy dia manana modely isan-karazany ianao, azonao atao ny mamorona avy amin'ny tantara manaitra kokoa ho an'ny Instagram handefa lahatsoratra ho an'ny feed, handefa ho an'ny Facebook na horonan-tsary ho an'ny TikTok sy Reels. Mahaliana ihany koa izy, amin'ny maha loharano azy, ny maodely atolony hamoronana sary kely ho an'ny horonantsary YouTube na ny modely natao hamoronana dinamika mpandray anjara amin'ny tambajotra sosialy sy ny fanadihadiana.
Ny zavatra tsara dia raha toa ka mamorona atiny ho an'ny anao, ohatra fahana avy amin'ny instagram, Miaraka amin'i Canva ianao dia afaka miantoka ny fihazonana ny firindrana sy ny fomba amin'ny publication rehetra. Raha mino ny rehetra ianao fahana Ao amin'ny antontan-taratasy iray ihany dia azonao atao ny mahita ny fomba fiarahan'ny sombin-javatra sy ahafahanao mampihatra palette miloko mitovy amin'izy rehetra.
Modely ho an'ny orinasa
Canva dia fitaovana mitombina tsara ho an'ny toeram-piasana, Izany dia mamela mamorona atiny tena matihanina. Ho an'ny asa isan'andro, modely ho an'ny mamorona fampisehoana Ilaina izy ireo, avelany hamorona endrika matihanina sy mahasarika maso izay miaraka sy manampy lanja ny fampirantianao.
Mikasika ny maha-izy azy ny orinasa, Canva no programa tonga lafatra ho an'ireo vao manomboka mitady kalitao. Manana modely ho azy ianao famolavola logo, zavatra manan-danja ao amin'ny bokin'ny ny maha-izy azy ny marika rehetra.
Banky sary, horonan-tsary, sary masina ary sary
Canva amin'ny fitaovana feno tanteraka. Ao anatin'ny tranonkala, dia nampiditra banky sary, horonan-tsary ary loharanom-pahalalana sary, Ka ny fampidirana sary, horonan-tsary, endrika, sary masina ary sary dia tsy mila mivoaka ny programa akory ianao, na dia azonao atao aza izany, mamela anao handefa loharano ivelany ihany koa.
Lahatsary sy sary
Raha tsikaritrareo, misy loharanom-pahalalana sasantsasany iharan'ny famandrihana pro, kanefa, manana loharanon-karena maimaim-poana ianao mba hahatonga ny endrika ho hitan'ny maso sy manintona kokoa.
Mba hanampiana sary sy horonan-tsary azonao tsindriana mivantana ary miseho eo afovoan'ny modely, na azonao sintomina izy ireo apetraka amin'ny sary efa noforonina. Mba hanovana ny habeny sy fanovana ny voka-tsoratry ny sary iray dia mila tsindrio indroa fotsiny ianao ary afindra mandra-pahatongan'ny sitrakao.
Sivana sy vokany
Ao Canva, azonao atao koa ny manisy sivana sy vokany amin'ny sary hanampiana anao hifanaraka amin'ny fomban'ny sarinao.
Endrika, sary masina ary sary
Ampidirina mitovy amin'ny sary izy ireo, tena mahaliana ry zareo ny manome fampahalalana fanampiny amin'ny atiny ary hanamafisana ny hevitra, fa hanampy koa singa haingon-trano amin'ny volavolanao.
Ao amin'ny sehatry ny singa dia azonao atao koa ny manampy ny zana-kazo izay ahafahanao manampy atiny ao aoriana. Tena ilaina amin'ny famoronana modely anao manokana.
Tabilao misy any Canva
Avy amin'ny tontonana entana afaka manampy sary tsotra ianao amin'ny antontan-taratasinao any Canva. Manana maodely maromaro ianao: bara, tsipika, boribory, fanaparitahana ...
Azonao atao ny manitsy azy ireo ary mampiditra ny angona mivantana any Canva, rehefa ampidirinao ao anaty pejy izy ireo dia misy takelaka kely hisokatra eo amin'ny ilany havia amin'ny programa mba hanaovanao izany.
Karazana endritsoratra sy paleta miloko
Canva dia manolotra palette sy loko miloko isan-karazany mba hahafahanao misafidy ny tsara indrindra ho an'ny endrika tsirairay. Raha te hiditra amin'izy ireo dia mankanesa any amin'ny tontonana, amin'ny bokotra «more»> «style».
Raha hamolavola avy amina antontan-taratasy banga ianao ary tsy hampiasa modely, Ny lokon'ny loko Canva dia manampy anao hisafidy loko milamina. Ary koa, rehefa mampiditra sary iray ianao, ny palette miloko an'io sary io dia miseho amin'ny safidy loko, mba hahafahanao misafidy sary miaraka amina paleta mitovy na manome ireo loko ireo amin'ireo singa samihafa ao amin'ilay rakitra.
Raha ny endritsoratra an-tsoratra, ny zavatra tena mahaliana dia tsy hoe manome anao fidirana amin'ny karazany maro karazana fotsiny izy ireo atolotray anao ny hevitr'ireo karazana mitambatra izay masiaka.
Fanontaniana vitsivitsy mahazatra momba an'i Canva
Ahoana no ahafahako mamorona ny kaontiko ao Canva?
Mamorona kaonty vaovao any Canva, mila miditra amin'ny tranonkala fotsiny ianao ary tsindrio ny «fisoratana anarana» (eo ankavanana, eo an-tampon'ny efijery).
Hanome anao ny safidy hisoratra anarana amin'ny kaonty Google anao, Facebook na amin'ny alàlan'ny mailaka. Safidio ny safidy tianao ary vonona ny manomboka mankafy Canva ianao.
Tsara kokoa ve ny miasa miaraka amin'ny modely na avy amin'ny rangotra?
Arakaraka, Miankina amin'ny fahazavanao ny famolavolana, ny fotoana tianao hatokana sy ny zavatra niainanao. Manana ny safidy foana ianao hamolavola amin'ny antontan-taratasy banga, afaka mamorona sombin-javatra lehibe manomboka amin'ny rangotra ianao. Saingy tsy midika izany fa tsy dia matihanina loatra ny miasa miaraka amina modely, ny môdely dia loharano tena tsara, izay mamonjy fotoana ary eo izy ireo hanararaotanareo.
Ahoana no ahafahako mamonjy ireo volavolako?
Aza adala mitady bokotra hitahiry ireo fanovana nataonao tao Canva, satria mamonjy azy ireo ho azy ity fitaovana ity rehefa manitsy ny antontan-taratasy ianao.
Eny azonao atao ny misintona ireo endrika amina solosainao, amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra «downloads» eo amin'ny ilany ankavanan'ny efijery Azonao atao aza ny mamonjy ireo fampisehoana ataonao amin'ny maha rakitra PowerPoint anao!
Farany, tadidio izany Miasa toy ny rahona i Canva. Azonao atao ny miditra amin'ny volanao amin'ny fitaovana rehetra hidiranao Mila fifandraisana Internet fotsiny ianao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Ahoana ny fampiasana Canva: fantaro hoe inona izany ary ahoana ny famolavolana amin'ny Canva
Inona ireo mpizara vy tsy mitanjaka?
Ahoana ny fomba hanaovana fampisehoana amin'ny PowerPoint